Indlela yokuyila iilogo zokuyila: Inyathelo ngenyathelo ukwenza ilogo yokuyila | Creatives Online
Indlela yokuyila iilogo zokuyila
Iibrendi, kunye noyilo lwelogo, ngoku zezona zibonwayo kwaye zibonwa kwishishini le ukuyila. Nangona kunjalo, amaxesha amaninzi siyayilibala amanyathelo ahambelanayo, ukuyila uphawu olusebenzayo, kwaye kwangaxeshanye, oluyilayo kunye nolomntu.
Sikhumbula izinto ezisisiseko: imibala okanye ii-inki, iifonti, izinto zegraphic, iigraphics, textures, geometric elements, njl. Kodwa asiyi kuqwalasela ezinye iinkalo ezinokuthi zisincede, xa udala imizobo yokuqala okanye i-contratypes.
Kule post, siza kukubonisa ezinye tips okanye iingcebiso oko kuya kukunceda wenze iilogo ezinomdla.
1 Ilogo njengophawu
2.2 Yenza uphando oluninzi
2.4 Ekujoliswe kuko
2.5 Yenza iintsingiselo ezintsha
2.8 Digitization kunye nobugcisa bokugqibela
Umthombo: Uyilo lweWebhu
Ilogo ichazwa njengophawu lwe isazisi. Kungenxa yoku apho uluntu luya kuchonga imveliso yakho kunye / okanye inkonzo phakathi kwezinye ezininzi. Yintoni abambalwa abayaziyo kukuba, emva kokudalwa kwelogo, kukho umsebenzi obanzi we uphando.
Oko kukuthi, inxalenye yophuhliso lweengqikelelo zethiyori apho siyazi ngokuba uyilo kunye nengqondo, okubandakanya i-semiotics, umbala, ukwakheka, ingqiqo, njl. Kule nto, kuthatha umyili ixesha elide ukuba afike kwisimboli esifanelekileyo, ekubeni kubaluleke kakhulu ukuba buhle kwaye busebenza, kwimfuno ethile yomthengi.
Okulandelayo, siya kukunceda ukuba uqiniseke ukuba ukuyila uphawu oluthile alufaki nayiphi na ingxaki kuwe. Ukongezelela, ukuba iindleko zomsebenzi oceliwe ngumxhasi zidlula uhlahlo lwabiwo-mali lwakho, kuya kufuneka ukuba ungenelele ngokukhawuleza, kwaye ukuba kuyimfuneko, ubuyele kwindawo yokuqala yokuqala yenkqubo yokuyila. Ngamanye amaxesha siqesha umyili kwaye asinalo nofifi lokuba ilogo yenziwa njani na, kwaye ukwazi ngaloo manyathelo kunokukunceda ukuba ucace ngakumbi kwaye ulungelelanise ngcono izimvo zakho njengezo zengcali, ube nesiphumo esanelisa ngakumbi.
Kubalulekile ukukhumbula ukuba akukho wand magic ukwenza uphawu. Umyili ngamnye unendlela yakhe.
Umthombo: Umhlaba wePC
Okokuqala, kufuneka siqonde ukuba i-logo kufuneka ibe lula. Siyaqonda njengento elula, uyilo olungadingi ukuxela into efuna ukuyithetha, kodwa luxelela kuphela. Kuba uphawu lubonisa umzobo wenkampani yakho kwaye kufuneka idityaniswe ngendlela elula ichongiwe, ngaphandle kolwazi olungeyomfuneko.
Masithi sinayo ikhathalogu yeelogo ezicokisekileyo, ezilayishwe zizinto kunye neziphumo, into enengqiqo kukuba zidlulisela imvakalelo ukungalungelelani. Ukuze uyiqonde ngcono, ilogo kuxa sijoyina i icon enika ubuso bophawu lwakho, kwisihloko / igama layo.
Oko kukuthi, oko kuthetha ukuba uphawu lwakho luyisiqingatha "soyilo" kunye nesiqingatha sombhalo. Kwaye ngamanye amaxesha, ukongeza kwigama lebhrendi yakho, umbhalo othile osuka inkxaso okanye isilogeni yongezwa. Ngenxa yoko, olo lwimi lulula lufanele lugcinwe kusapho lwamagama esiza kubhalwa ngawo eso sibhalo. Qaphela ukuba "umthombo" ucatshulwe kwisinye. Ukusebenzisa ifonti engaphezulu kwesinye kwilogo akukhuthazwa. I-typography efanayo kwilogo yakho ivelisa ukuhambelana okubonakalayo, izinto zidibanisa ngcono kwaye ubhala kwimemori ebonakalayo yomthengi wakho, igama lophawu lwakho kwifonti ethile.
Yenza uphando oluninzi
Inxalenye ebaluleke kakhulu yokudala ilogo elungileyo yi uphando njengenyathelo lokuqala. Oku ayisiyiyo kanye indlela izinto eziyiyo, kodwa ukuba neembekiselo ezilungileyo kubalulekile ekudaleni ilogo enomdla.
Ukuqhuba isigaba esilungileyo sophando, kukhokelela kuhlalutyo oluchanekileyo kunye nokudalwa kwamanyathelo aza kamva. Oko kukuthi, ukuba siqala ngokuzoba into esingayaziyo ukuba yintoni kanye kanye, isiphumo siya kufana nokuba singenzanga nto. Yiyo loo nto abaqulunqi begxininisa ekuphandeni, kwi zibhalwe.
Okokuqala, cinga ngeelogo othanda kakhulu. Ezo logo ozijongileyo kwaye wazi kakuhle ukuba zingantoni na. Imizekelo efana ne-Nike, i-Coca-Cola kunye ne-Apple ihlala icatshulwa ngenxa yokuba ayinakuphikiswa ukuba ezi zimpawu ziinkokeli zentengiso kumacandelo azo kwaye zibonwa ngokulula ziilogo zazo.
Ukholelwa okanye awukholelwa, kukho iinkampani ezenza imveliso efanayo njengawe okanye mhlawumbi zenza ngendlela efanayo ekufutshane nento ofuna ukuyithengisa. Xa oku kusenzeka, kubalulekile ukuba uhlalutye ukhuphiswano lwakho.
Ukuhlalutya ukhuphiswano lwakho akuthethi ukukopa kanye into abayithengisayo kunye nendlela abayithengisa ngayo. Kodwa yazi yakho indlela kwaye sicinge ukuba singenza njani phucula ukuze inkampani yethu ikwazi ukuzibeka phezulu kwimarike.
Isicwangciso sokuthengisa sinokuvakala siqhelekile kuwe, ke, kulapho ukuthengisa kunye nezicwangciso zayo ezahlukeneyo ziqala ukudlala. Sikunika lo mzekelo ulandelayo ukuze uqonde ngcono: Khawucinge ukuba kufuneka udale uphawu lwenkampani ethengisa iiteki. Into yokuqala ekufuneka siyenzile emva kophando kukuhlalutya ukhuphiswano olunokwenzeka. Ukwenza oku, siya kuqhuba uphando lwezakhono zangaphakathi nangaphandle, ezifana Nike Nike Kungaba lukhuphiswano olulungileyo lwangaphakathi kuba ivelisa iiteki kwaye indlela yayo yokuzithengisa inokuba kufutshane nento oza kuyithengisa kunye nendlela oza kuyithengisa ngayo.
Ewe, ukuba sele silukhankanye ngaphambili ukhuphiswano, ngoku sichaza ukuba yeyiphi ingongoma elandelayo. Ithagethi ayikho into engaphezu kwento esiyaziyo ekuthengiseni njengabaphulaphuli ekujoliswe kubo. I abajoliswe kuzo, ukuze uqonde ngcono, abaphulaphuli esiza kuthetha nabo bayachazwa. Oko kukuthi, ukuba i-Nike ithengisa ama-sneakers, eyona nto ingqiqweni kukuba ijoliswe kubadlali bezemidlalo kwaye kungekhona kubahlengikazi okanye abapheki. Kodwa oku akupheli apha, kuba ekujoliswe kuko kubandakanya ubudala, izinto abazithandayo kunye nezinto abazithandayo kunye nenqanaba lenkcubeko yentlalo abanayo.
Yiyo loo nto, ngaphambi kokwenza uphawu, kufuneka wazi ukuba inkampani yakho iza kujongana nabani.
Yenza iintsingiselo ezintsha
Emva kokwazi ukuba yintoni ukhuphiswano lwakho oluyenzayo kunye nokuhlalutya okujoliswe kuko, kufuneka uzihlaziye kwaye ujonge yonke into eyenzekayo ngokubhekiselele kuyilo. Uyilo yinto ehlala iguquka. Okwenziwa ngeminyaka yee-90 kwahluke ngokupheleleyo koko kwenziwa ngeminyaka yee-2000, okwahlukileyo, kwakhona, kwinto eyenziwayo namhlanje. Yiyo loo nto, xa sithetha ngoyilo, sithetha ngothotho lwe iziganeko eziye zakhululwa ekuhambeni kwexesha kwaye endala iguqulwa ibe yinto entsha ukuze entsha ibe yindala ngokuhamba kwexesha kwaye izise uyilo olutsha njalo njalo.
Ukukhangela iilogo ezenziwe namhlanje kunye nokuzithatha njengereferensi, kuthintela ukudalwa kwento ephelelwe lixesha okanye ngaphandle kweepatheni zangoku. Kusenokubonakala ngathi luluvo olulungileyo ukwenza into ngaphandle kwebhokisi ukuze ibonakale ngokulula, kodwa ngaloo ndlela ibhrendi yakho inokunxulunyaniswa nento yakudala kakhulu okanye incasa embi, ngaphandle kwesazisi esicocekileyo esibonwayo, esinelousy. Kwakhona khumbula ukuba akukho nanye "Umkhwa" yangoku. Utyekelo luhlala kunye, luyaxubana, luyahlula.
Xa sele siyiphande yonke into esiyidingayo, kuyafuneka ukuba siqhubele phambili kwi-conceptualization. Le nkqubo ayikho enye into ngaphandle kwengqokelela yamagama, oko kukuthi, amagama esishwankathela yonke into esifuna ukuyenza kuyilo lwethu nakwinkampani yethu. Ngokuqhelekileyo, uluhlu lwenziwe lwezo ngcamango zombini ebonakalayo njengaye abstract.
Kwaye kutheni le ngongoma ibaluleke kangaka? inyathelo elidlulileyo kwinkqubo yokuzoba. Oko kukuthi, xa sinazo zonke ezi ngcamango ngendlela yamagama, kuya kufika ixesha lokuqalisa ukuziguqula zibe yimizobo yokuqala, imizobo emincinci ebonisa okokuqala-isandla into esifuna ukuyithetha.
Okulandelayo, sichaza inyathelo elilandelayo esikuxelele ngalo: isigaba sokuzoba.
Imizobo ichazwa njengemizobo yokuqala, okanye imikrwelo ukuze uqonde ngcono. Le mizobo iya kucokiswa ngokuhamba kwexesha kunye nenkqubo. Ngamanye amazwi, siya kuqala kwingcamango yokuqala eya kuxela into malunga neprojekthi yethu, kwaye siya kuyiphucula ukuze ekugqibeleni ixelele yonke into.
Imizobo inokupheliswa okanye ikhethwe, kuxhomekeke kwimisebenzi esifuna ukuyinika ukuyila kwethu. Yiyo loo nto isigaba sokuzoba sesinye sezigaba ezisinika uncedo lokufikelela kwisiphumo sokugqibela esifuna ukusifumana.
Digitization kunye nobugcisa bokugqibela
Sakuba sinoyilo olukhethiweyo nolusulungekileyo, lufakwa ekhompyutheni. Kufuneka sithathele ingqalelo ukuba yeyiphi inkqubo esiza kusebenza nayo kwaye siza kuyisebenza njani emva kokuba siyidlulisele kwiPC. Ke ngoko, kubaluleke kakhulu ukuba sifunde kwangaphambili malunga nendlela esifuna ngayo imigca, i-typography, i-inks zechromatic okanye i-palette yombala njl.
Nje ukuba ifakwe kwidijithali, uhlengahlengiso lokugqibela lugqityiwe ukuyila kunye nokuphinda kucocwe kwaye ubugcisa bokugqibela.
Xa sithetha ngoyilo loyilo, sibhekisa kwiseti yeenkqubo ekufuneka sizifezekise ukuze uyilo, ukongeza kubuchule bokuyila kunye nobuqu, lukwanjalo. iyasebenza. Uyilo loyilo olungasebenziyo kwi-brand alusebenzi.
Ngoku lixesha lokuba uqale ukuyila kwaye ulandele amanyathelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Indlela yokuyila iilogo zokuyila
Ungazitshintsha njani izihluzi kwiTik Tok